नेकपाकै मोडलमा एकीकरण ! लोहनी नआए भोलि नै राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको एकता
Mon, Jun 1, 2020 at 5:09am
पार्टी एकताका लागि भएका प्रगतिबारे जानकारी दिन तीनवटै पार्टीका अध्यक्षले आ–आफ्नो पार्टीमा ब्रिफिङ गर्न पार्टी बैठक बोलाएका छन्
आईतवार, २५ कार्तिक २०७५,	आहाखबर	1.12K
झण्डै दुई वर्षअघि छिन्नभिन्न भएका तीनवटा राप्रपा फेरि एकीकरणको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
नेताहरुका अनुसार डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी पनि सहमतिमा आए केही दिन समय लिनसक्छ । नभए कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपतिशम्शेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकबीच भोलि नै एकता घोषणा हुनसक्छ ।
तीनै पार्टीका नेताहरुका अनुसार पार्टी एकता घोषणाको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । उनीहरुका अनुसार तत्कालै आ–आफ्नो पार्टीमा एकताबारे छलफल गरेर संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी एकताको मिति घोषणा गरिनेछ ।
पार्टी एकताका लागि भएका प्रगतिबारे जानकारी दिन तीनवटै पार्टीका अध्यक्षले आ–आफ्नो पार्टीमा ब्रिफिङ गर्न पार्टी बैठक बोलाएका छन् ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको आइतबार दिउँसो बैठक बस्दैछ । सो पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकामा उपलव्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक आइतबार बोलइएको हो ।
आइतबार पनि तीनै राप्रपाका शीर्ष नेताहरुबीच सम्वाद भएको छ । तर, एकताबारे सहमति भइसकेको छैन ।
नेताहरुका अनुसार थापा र राणाबीच भने अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ । दुबै अध्यक्ष हुने, ८/८ सदस्य राखेर सचिवालय बनाउने र सैद्धान्तिक विषयमा एकता महाधिवेशनले तय गरेको दस्ताबेजलाई मान्ने सहमति भएको छ ।
तर, लोहनीका सन्दर्भमा सहमति जुटेको छैन । उनले थापा र राणासरह आफ्नो पनि हैसियत हुनुपर्ने माग राखेका छन्, जसलाई दुबैले स्वीकार गरेका छैनन् ।
‘लोहनी पनि आउने भए केही दिनपछि एकता होला, नभए भोलि नै एकता हुनसक्छ’ राप्रपाका एक नेताले भने ।
राप्रपाले आइतबार नै उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएको छ भने राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पनि बैठक बस्दैछ । बैठकमा पार्टी एकता वार्तामा भएका प्रगतिबारे नेताहरुले जानकारी गराउने राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।